မော်လမြိုင် သင်္ကြန်အကျနေ့ လူငယ်များ - APANNPYAY
Home / ပြည်တွင်းသတင်း / သင်္ကြန်သတင်းများ / မော်လမြိုင် သင်္ကြန်အကျနေ့ လူငယ်များ
မော်လမြိုင် သင်္ကြန်အကျနေ့ လူငယ်များ
Apann Pyay 10:59 PM ပြည်တွင်းသတင်း , သင်္ကြန်သတင်းများ Edit
မော်လမြိုင်သင်္ကြန်အကျနေ့တွင် မြန်မာ့တပ်မတော် စစ်တပ်ဝတ်စုံ နှင့် ဆင်တူယိုးမှားချုပ်ကာ ဝတ်ဆင်လည်ပတ်တဲ့ လူငယ်တွေကို ဖမ်းဆီး
အကျနေ့ မော်လမြိုင်သင်္ကြန်ကို အကျည်းတန်စေတဲ့ လူငယ်တစ်စု ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုသည် တခြားသူတွေကို အနှောင့် အယှက် မဖြစ်ပါစေနဲ့….. နောက်ဆက်တွဲကတော့……. သင်္ကြန်ကာလအတွင်းအများပြည်သူများထင်ယောင် ထင်မှား အထိပ်တလန်ဖြစ်စေနိုင်သည့်သရုပ်ပျက်ဝတ် စားဆင်ယင်သူများထံမှပစ္စည်းများသိမ်းဆည်းရရှိ ။
မော်လမြိုင် ဧပြီ ၁၄ သင်္ကြန်ကာလအတွင်းအများပြည်သူများအထိပ်တ လန်ဖြစ်ပွားစေပြီးထင်ယောင်ထင် မှားမဖြစ်ပွားေ စရန် ရည်ရွှယ်၍၁၃.၄.၂၀၁၇ ရက်နေ့ ၇ နာရီ နံနက်ပိုင်းမှစတင် ပြီးမွန်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဒုပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရဲမှူး ကြီးေ သာင်းဝင်းနှင့်မြို့နယ်ရဲမှူးရဲမှူးအောင်မြင့်၊ပြည် နယ်ရဲအကူတပ်ဖွဲ့ဒုရဲမှူးဝင်းနိုင်နှင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ သည်မော်တော်ယဉ် ၅ စီးမော်လမြိုင်မြို့အနှံလှည့် ကင်းဆောင်ရွှက်နေစဉ်မြေနီကုန်းကားဝင်းရှေ့ရှိရေ ကစားမဏ္ဍပ်တခုတွင်လူ ငယ်တဦးထံ မှ တပ်မတော်တံ ဆိပ်တပ်ဆင်ထားသောပျောက်ကျားအင်္ကျီတထည်၊ တောင်ဝိုင်းရပ်ကွက်ရှိအရေပြားဆေးရုံ အနီးလမ်းေ ဘး တွင်ကျိုက်မရောမြို့နယ်၊ပိန္နဲကုန်းကျေးရွှာရှင်စောပု လမ်းနေလူငယ်များထံမှတပ်မတော်တံဆိပ်တပ်ဆင် ထားသောေ ပျာက်ကျားအကျီင်္၂၂ထည်၊ဦးထုပ်နီညို ရောင် ၃၀ လုံး၊မြိုင်သာယာရပ်၊တိုင်းရင်းဆေးရုံရှေ့ရှိ ရေကစားမဏ္ဍပ်တွင်လူငယ် ၄ဦးထံမှပျောက်ကျားအ ကျီ ၄ ထည်၊ဈေးချိုရပ်ဆန်တန်းလမ်းရှိရေစကားမဏ္ဍပ် တခုတွင်လူငယ် ၁၂ ဦးထံမှ ပျောက် ကျားအကျီ ၁၂ ထည်စုစုပေါင်းပျောက်ကျားအကျီ ၃၉ ထည်ကိုသိမ်း ဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းသတင်းရှိပါသည်။
အဲ့ဒီဆင်တူယိုးမှားအိင်္ကျီတွေဝတ်ဆင်ကာ လူငယ်တွေဟာ မော်လမြိုင်တမြို့လုံး လှည်လည်သွားလာနေကြတာကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့က မော်လမြိုင်တမြို့လုံးလိုက်လံရှာဖွေကာ သိမ်းဆည်းခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Credit-Aung Lann pyae
မျောလမွိုငျသင်ျကွနျအကနြတှေ့ငျ မွနျမာ့တပျမတျော စဈတပျဝတျစုံ နှငျ့ ဆငျတူယိုးမှားခြုပျကာ ဝတျဆငျလညျပတျတဲ့ လူငယျတှကေို ဖမျးဆီး
အကနြေ့ မျောလမွိုငျသင်ျကွနျကို အကညျြးတနျစတေဲ့ လူငယျတဈစု ကျိုယျ့ရဲ့ပြျောရှငျမှုသညျ တခွားသူတှကေို အနှောငျ့ အယှကျ မဖွဈပါစနေဲ့….. နောကျဆကျတှဲကတော့……. သင်ျကွနျကာလအတှငျးအမြားပွညျသူမြားထငျယောငျ ထငျမှား အထိပျတလနျဖွဈစနေိုငျသညျ့သရုပျပကျြဝတျ စားဆငျယငျသူမြားထံမှပစ်စညျးမြားသိမျးဆညျးရရှိ ။
မျောလမွိုငျ ဧပွီ ၁၄ သင်ျကွနျကာလအတှငျးအမြားပွညျသူမြားအထိပျတ လနျဖွဈပှားစပွေီးထငျယောငျထငျ မှားမဖွဈပှားေ စရနျ ရညျရှယျ၍၁၃.၄.၂၀၁၇ ရကျနေ့ ၇ နာရီ နံနကျပိုငျးမှစတငျ ပွီးမှနျပွညျနယျရဲတပျဖှဲ့ဒုပွညျနယျရဲတပျဖှဲ့မှူးရဲမှူး ကွီးေ သာငျးဝငျးနှငျ့မွို့နယျရဲမှူးရဲမှူးအောငျမွငျ့၊ပွညျ နယျရဲအကူတပျဖှဲ့ဒုရဲမှူးဝငျးနိုငျနှငျ့တပျဖှဲ့ဝငျမြား သညျမျောတျောယဉျ ၅ စီးမျောလမွိုငျမွို့အနှံလှညျ့ ကငျးဆောငျရှကျနစေဉျမွနေီကုနျးကားဝငျးရှရှေိ့ရေ ကစားမဏ်ဍပျတခုတှငျလူ ငယျတဦးထံ မှ တပျမတျောတံ ဆိပျတပျဆငျထားသောပြောကျကြားအကငြ်ျီတထညျ၊ တောငျဝိုငျးရပျကှကျရှိအရပွေားဆေးရုံ အနီးလမျးေ ဘး တှငျကြိုကျမရောမွို့နယျ၊ပိန်နဲကုနျးကြေးရှာရှငျစောပု လမျးနလေူငယျမြားထံမှတပျမတျောတံဆိပျတပျဆငျ ထားသောေ ပြာကျကြားအကြီင်ျ၂၂ထညျ၊ဦးထုပျနီညို ရောငျ ၃၀ လုံး၊မွိုငျသာယာရပျ၊တိုငျးရငျးဆေးရုံရှရှေိ့ ရကေစားမဏ်ဍပျတှငျလူငယျ ၄ဦးထံမှပြောကျကြားအ ကြီ ၄ ထညျ၊စြေးခြိုရပျဆနျတနျးလမျးရှိရစေကားမဏ်ဍပျ တခုတှငျလူငယျ ၁၂ ဦးထံမှ ပြောကျ ကြားအကြီ ၁၂ ထညျစုစုပေါငျးပြောကျကြားအကြီ ၃၉ ထညျကိုသိမျး ဆညျးရမိခဲ့ကွောငျးသတငျးရှိပါသညျ။
အဲ့ဒီဆငျတူယိုးမှားအိင်ျကြီတှဝေတျဆငျကာ လူငယျတှဟော မျောလမွိုငျတမွို့လုံး လှညျလညျသှားလာနကွေတာကွောငျ့ ရဲတပျဖှဲ့က မျောလမွိုငျတမွို့လုံးလိုကျလံရှာဖှကော သိမျးဆညျးခဲ့ရတာဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။